Accor nwere azịza n'efu na COVID-19: Dọkịta mebere
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Accor nwere azịza n'efu na COVID-19: Dọkịta mebere
Akụkọ na -agbasa Australia • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akwụkwọ akụkọ French Polynesia • investments • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Site taa, ndị ọbịa nkwari akụ Accor niile dị n'Australia, New Zealand na French Polynesia ga-enwe ohere ịbanye na ntanetị nke ọtụtụ puku ndị ọkachamara ahụike 24/7 kwadoro site na ndụmọdụ tele-medical iji nyere aka na ọnọdụ ahụike ọ bụla bilitere n'oge ha nọrọ.
Ọrụ ahụike a na-akwụghị ụgwọ ọ bụla nwere ike itinye aka na ahụike ọ bụla na-adịghị mkpa ma dabara adaba, mana na-ejedebeghị na, Covid-19 na-echegbu onwe ya ka ọ na-enye ndị ọbịa ohere ịnata ndụmọdụ ahụike na nkasi obi nke ime ụlọ ha.
Accor na-enye ndị ọbịa nọ na Accor hotels, ebe ntụrụndụ na ụlọ n'ụlọ ụwa site na mmekọrịta mmekọrịta ya na AXA, onye ndu ụwa zuru oke na mkpuchi na ọgwụgwọ telemedicine.
Simon McGrath, COO nke Accor Pacific, kwuru, sị, “Ebumnuche anyị dị mfe - ilekọta na ilekọta ndị ọbịa anyị niile dị oke ọnụ.
Nakwa ịnata nnabata na nchekwa dị na Accor nkwari akụ, ebe ezumike ma ọ bụ ụlọ, mmekọrịta anyị na AXA ga-enyere ndị ọbịa anyị aka site n'inye ha ndụmọdụ na ahụike dị mfe. Anyị na-atụ anya na atụmatụ a ga-eweta udo nke uche ọzọ. ”
Accor na-ebute nchekwa nke ndị ọbịa ya kwa ụbọchị maka ihe karịrị afọ 50, n'ihi ụkpụrụ ịdị ọcha ya na ịdị ọcha ya nke etinyere na họtel ya niile gburugburu ụwa.
N'ihi ọrịa Covid-19 na-efe efe na iji hụ na nchekwa nke ndị ọbịa na ndị otu, Accor buliri ụkpụrụ ndị a elu karịa mmalite afọ a site na ịmalite ịdị ọcha na mgbochi mgbochi ya, ALLSAFE, nke nwere ụfọdụ ụkpụrụ nhicha na usoro njikwa arụmọrụ. ụwa ile ọbịa iji hụ na ndị mmadụ ga-enwe udo nke uche ma ha na Accor nọrọ.
Enwere usoro ogbugba ndu iri na isii, tinyere onye ọrụ ALLSAFE na nkwari akụ ọ bụla, ọzụzụ ọzọ maka ndị otu, yana usoro nhicha agbakwunyere nke gụnyere iji ngwaahịa ọkwa ahụike mara maka igbu nje ahụ.
N'afọ a, ndị otu Accor etinyela aka na inye nlekọta maka ichekwa ma ọ bụ ịkewapụ ndị ọbịa, ebe obibi maka ndị ọrụ na-aga n'ihu, na ngwugwu nri maka ndị dọkịta na ndị nọọsụ, yana maka ndị obodo.
Accor nyekwara ndị na-enweghị ebe obibi na ndị ọzọ na-enweghị nsogbu nke obodo ahụ mkpa mgbaba n'oge nsogbu ahụ.